ကျွန်မတို့ဟာ ဘာကြောင့် အသစ်အသစ်တွေကို ဝယ်ချင်နေကြတာလဲ? ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ
လူတွေဟာ ငွေကြေးကို သူတို့လိုအပ်တာထက် ပိုသုံးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်း (၂) မျိုးရှိပါတယ်။ နာကျင်မှုတွေေဆီကနေ အဝေးကို ပြေးဖို့ (သို့) ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ပိုနီးစပ်လာစေပြီး ခံစားမှုတွေပိုကောင်းလာစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်စုံအသစ်တစ်စုံဝယ်ဖို့ (သို့) စမတ်ဖုန်းလိုမျိုး အရမ်းစျေးကြီးလွန်းတဲ့ တစ်စုံတရာကို ဝယ်ယူပြီး ကျွန်မတို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဧည့်ဝတ်ကျေပွန်ရင်း ကျွန်မတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ပြဿနာမှန်သမျှကို အာရုံလွှဲထားကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ ဒီပစ္စည်းကို လုံးဝမလိုအပ်ဘူးဆိုတာကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိနေမယ်ဆိုရင်တောင် ၎င်းကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမခံကြပါဘူး။
၁။ သင်ဟာ တစ်ခြားလူတွေဆီကနေ ချီးမွန်းတာတွေ၊ လေးစားတာတွေကို မျှော်လင့်နေတယ်
သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ Darwin ရဲ့ evolution သီအိုရီအရ လူသားတွေဟာ သူတို့ထက်သာတယ်လို့ ထင်တဲ့လူတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးကျော်တက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့အားလုံးရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဟာ ဘယ်လောက်ပဲဖြည့်ဆည်းနေပါစေ ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ လူတွေဟာ ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ယူတယ်ဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုတွေနှင့် အရေးပါအရာဝင်မှုတွေကို ကမ္ဘာကြီးမှာ ချန်ရစ်ထားခဲ့ဖို့ပါပဲ။
အဲ့ဒီ့အစား အသွင်အပြင်ကောင်းနေဖို့ထက် ခံစားချက်တွေကောင်းနေဖို့က ပိုအရေးကြီးကြောင်း သတိရပါ။ ဘယ်လောက်စျေးကြီးတဲ့ ဆွယ်တာဖြစ်နေပါစေ တစ်သက်လုံးဝတ်လို့မရကြောင်း နားလည်ပါ။ ဝတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တောင် သင်မဝတ်ပါဘူး။
၂။ သင့်ထက် ပိုပြီးကြီးပွားနေတယ်လို့ ထင်ရင် မနာလိုဖြစ်တယ်
ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှိုင်းယှဉ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ ကျွန်မတို့ကို ပစ္စည်းပစ္စယတွေ ဝယ်ယူရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ ကျွန်မတို့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တန်းတူညီတူဖြစ်စေတာဖို့ အမှန်တကယ်လိုအပ်လာတာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ စစ်မှန်ပါ့မလား?
တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ အကြောင်းအရာသေးသေးလေးတွေကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကြီးကြီးတွေဝယ်ယူခြင်းက ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ တိုက်ရိုက်အချိုးမကျပါဘူး။ ၎င်းကို သင်ရရှိလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ချက်ချင်းတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ၎င်းက ချက်ချင်းပဲ ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ရိုးရှင်းသော ညစာစားခြင်းနှင့် သင့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုနှင့် စကားကောင်းကောင်းပြောရခြင်းက ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေလိမ့်မယ်။ ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းက သင့်ရဲ့ ရှင်သန်မှုနှုန်းကို မြှင့်တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
၃။ သင်ဟာ စျေးကွက်ရဲ့ လှည့်ကွက်တွေမှာ ကျရှုံးသွားတယ်
သင်တစ်ခုခုကို ဝယ်ယူဖို့ သုံးနိုင်သောလှည့်ကွက်များစွာရှိပြီးတာ့ သင်ကတော့ သတိမထားမိပေမယ့် ကုမ္ပဏီတွေကတော့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကံစမ်းမဲဖောက်ခြင်း၊ အစမ်းသုံးကြည့်ဖို့ အခွင့်အရေးပေးခြင်းနှင့် နောက်ဆက်တွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်း လှည့်စားဖို့ဖန်တီးထားပါတယ်။
ဒီတော့ စျေးဝယ်မထွက်ခင် သင်လိုအပ်တာတွေကို စဉ်းစားပါ။ လူတွေက အွန်လိုင်းမှာ ဝယ်ယူတာထက် ဆိုင်မှာ ဝယ်ယူတာက ပိုများတယ်လို့ ခံယူထားကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စျေးဝယ်မထွက်ခွာမှီ စျေးစာရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားသင့်ပြီး ၎င်းကိုလည်း လက်ဝယ်ထားရှိပါ။
၄။ သင့်ဘဝကို မထိန်းချုပ်နိုင်ဘူးလို့ ခံစားရပါတယ်
ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခြင်းက ကျွန်မတို့ကို ပိုပြီး လုံခြုံမှုရှိစေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေ၊ အိမ်ခေါင်မိုး (သို့) အဝတ်အထည်တွေဟာ အမှန်အကန်လိုအပ်ပေမယ့်လည်း ပိုပိုလျှံလျှံလေေးရှိနေတဲ့အခါ ပိုပြီး လုံခြုံမှုရှိလိမ့်မယ်လို့ ခံစားရလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခံစားချက်တွေဟာ မတည်ငြိမ်ကြောင်းတော့ မေ့နေကြပြန်ပါတယ်။
ဘာလုပ်ရမလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်းနဲ့ ရှင်သန်တတ်ဖို့ သင်ယူပါ။ သင်တတ်နိုင်တဲ့အရာထက် ပိုပြီးပိုင်ဆိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းပြီး သင်ကိုယ်တိုင်အားပေးပါ။ စျေးမဝယ်ခင် ဒီမေးခွန်းကို မိမိကိုယ်ကိုယ်ပြန်မေးပါ။ ‘ငါဘာကြောင့် ဒါကို ဝယ်ရမှာလဲ၊ ရူးနေလား?
ကျွန်မတို့ ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူရခြင်းရဲ့ အဓိကအကျဆုံးအကြောင်းပြချက်က ပျင်းတာပါပဲ။ ကျွန်မတို့ဟာ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိဖြစ်နေတဲ့ နေ့ရက်တွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ တစ်နေ့တာကို အသစ်အဆန်းလေးတွေက ကျွန်မတို့ကို ပျော်ရွှင်စေမယ်လို့ ယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပါ။
ဘာလုပ်ရမလဲ- တကယ်လို့ သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင် အတွေ့အကြုံတွေအတွက် သင်ယူပါ။ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနေထိုင်ခြင်းက သင်နှင့် သင်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ပိုကောင်းတဲ့အနာဂတ်ကိုဖြစ်စေမယ့် အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအတွက် သင့်ရဲ့ အချိန်နှင့် ငွေကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အသစ်အသစ်တွေကို ဝယ်ယူမယ့်အစား စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းအတွက် စာရင်းသွင်းပါ။ မဟုတ်ရင်လည်း ကမ္ဘာကြီးကို လေ့လာပါ။